गोप्य अङ्ग माथि हरियो पात को खेल …… – Dhukdhuki fm
in कला — by admin —	May 24, 2017
काठमाडौं, जेष्ठ १० – ‘रितिका जिरेल’ पेशा ले ब्युटिसियन हुन् । दोलखा चरिकोट निवासी जिरेल फुर्सद को समयमा कृषि फर्म मा पनि व्यस्त हुन्छिन र मनग्य आम्दानि गर्छिन पनि । उनै रितिकालाई अचानक मोड्लिंग को भुत चढेपछी अहिले उनी आफ्नो सम्पूर्ण कपडा खोल्न पुगेकी छिन। आफ्नो सम्पूर्ण कपडा खोलेर पातले मात्र छोपेर फोटो सेस्सन गराए पछि अहिले ज्योति मगर,तृष्णा बुढाथोकी,अर्चना परेरु को लिस्ट मा उनको पनि नाम थपिएको छ।
आखिर के यो मोड्लिंग क्षेत्र मा लाग्नलाई आफु सर्वाङ्ग नाङ्गिनै पर्छ त ? या जिरेल लाई कसैले बाध्य पारेको हो ? यो कुरा स्पस्ट रुपमा बाहिर अाइसकेको छैन । तर ध्रुवसत्य कुरा चाहिँ के हो भने मोडलिङ्ग गर्नलाई कपडा उतार्नु जरुरी नै त नहोला ।
हेरौँ रितिका को यो हट रुप ले नेपाली मोडेलहरुको भिडमा कस्तो खल्बली मच्चाउँ छ । अनी अब का दिन मा रितिका कस्तो रुपमा प्रस्तुत हुन्छिन, त्यो समय ले हामीलाई देखाउँदै जाने छ । केवल प्रतिक्षा गरौँ ।